APIE ၏အပိုင်းအစ - 2018ပြီလ ၂၀၁၈ သတင်းလွှာ - Austin Partners in Education
APIE ၏တစ် ဦး ကအချပ်: Aprilပြီလ 2018 သတင်းလွှာ
ဧပွီ 27, 2018
ပညာရေးအတွက် Austin အပေါင်းအဖေါ်များ @austinpartners @austinpartners
ပြီလ အမျိုးသားစေတနာ့ဝန်ထမ်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းလ! APIE ကိုယ်စား၊ ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးသည့်စာသင်ခန်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောကျောင်းသားများသည်သင်လုပ်ဆောင်သမျှအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ၏ဘဝ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မြတ်နိုးဖွယ်အလှူရှင်တစ် ဦး အကြောင်းနှင့်ဤနှစ်၏ APIE ချန်ပီယံများကိုကြည့်ရှုရန်အတွင်းလူ၏ရှုထောင့်ကိုအောက်တွင်ဖတ်ပါ။
လျင်မြန်စွာ APIE ၏ကိုက် | စေတနာ့ဝန်ထမ်းနှင့်ပတ်သက်။ စကားအနည်းငယ်
“ လုပ်အားခအားလုံးကိုယုံကြည်ပြီးလစာမပေးနိုင်တဲ့စိတ်အားထက်သန်သူတွေကိုစေတနာ့ဝန်ထမ်းအားလုံးဒီမှာတွေ့နိုင်တယ်။ ” - Robert Orben
“ တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာမင်းမှာဘာရှိလဲ၊ သင်ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ခဲ့တာတွေတောင်မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုမြှောက်ပြီးဘယ်သူ့ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပဲ။ မင်းပြန်ပေးဆွဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ် - Denzel ဝါရှင်တန်
“ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတာဟာသင်လုပ်ချင်တာထက်ပိုလုပ်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းကလိုချင်တယ်၊ - အိုင်ဗင် Scheier
စေတနာ့ဝန်ထမ်းမီးမောင်းထိုးပြ | မဟာမိတ်ကိန်း
Allie Kane သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မယုံနိုင်စရာသင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ APIE နှင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်အတူ Allie သည် UT Austin မှအကြီးတန်းအရာရှိဖြစ်ပြီး၊ သူသည်ဇီဝဓာတုဗေဒဘာသာရပ်ကိုလေ့လာပြီးကျောင်းဝင်းတွင်အလွန်ပါဝင်ပတ်သက်သည်။ Allie သည်အောက်ဖော်ပြပါအင်တာဗျူးတွင်လုပ်အားပေးအဖြစ်သူမ၏အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေသည်။
သင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြနှင့် UT အကြီးတန်းအယ်လီကိန်း
ငါသင်ကြားရေးကိုချစ်။ UT Austin မှသိပ္ပံနည်းကျဆရာများအတွက်ပထမ၊ ပထမနှစ်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့အသင်းလို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်သင်တန်းတက်ဖို့သင်တန်းသားအသစ်ပါ။ ၎င်းသည်ကျောင်းသား ၂၅ ဦး ခန့်ရှိသောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ကောလိပ်ကျောင်းသားဖြစ်လာရန်အကြံဥာဏ်များနှင့်လှည့်ကွက်များကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်သူတို့ကိုဆက်သွယ်မှုများပြုလုပ်ရန်နှင့်ကောလိပ်သို့အရင်းအမြစ်များကိုလတ်ဆတ်စေသည့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ငါသည်သူတို့၏အသင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။
သငေ်္ဘာကျောင်းသားများနှင့်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်နှင့်အတူကျွန်ုပ်သည်သုတေသနဓာတ်ခွဲခန်းတွင်သင်ကြားရေးလက်ထောက်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ငါသိပ္ပံပညာကိုနှစ်သက်တယ်၊ ဒါကြောင့်သင်ကြားမှုသွင်ပြင်လက္ခဏာကိုသင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြအဖြစ်ငါနှစ်သက်တယ်။ ကျောင်းသားများတွင်ကွဲပြားသောအတွေ့အကြုံအဆင့်များကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ငါခက်ခဲသဘောတရားများကိုရှင်းပြပျော်မွေ့။ ကျောင်းသားတိုင်းနားလည်နိုင်ရန်သင်ခန်းစာများကိုရှင်းပြရန်နည်းလမ်းသစ်များဖြင့်လာခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ပျော်စရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ STEM နှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းများအတွက်ထပ်တူကျမှုသည် APIE နှင့်အလွန်ကိုက်ညီပါသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားကျောင်းမှဖိစီးမှုမှများစွာလိုအပ်သောသက်သာမှုကိုပေးခဲ့သည်။ ငါလမ်းလျှောက်ဝင်လာတယ်၊ ငါလိုပေါ့၊ ဒါကကောင်းတယ်၊ ငါကျောင်းသားတွေကိုကူညီတတ်အောင်ကူညီပေးတယ်။
သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောကလေးများနှင့်ပတ်သက်သောသင်အကြိုက်ဆုံးပုံပြင်များနှင့်နည်းပြနည်းပြတစ် ဦး ကဘာလဲ။
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့သည်အတန်းအဆုံး၌အချိန်ပိုရပြီးကျောင်းသားများသည်သူတို့မလုပ်ရသောပြproblemsနာများကိုလုပ်ကိုင်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ကျောင်းသားများသည်သင်ယူလိုစိတ်ရှိကြသည်။ ဆရာကတောင်းတာထက်ပိုလုပ်ချင်တယ် အဲဒါကကျွန်မကိုအသုံးဝင်တယ်လို့ခံစားရစေတယ်။
ပထမသုံးပတ်အတွင်းကျောင်းသားများသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အကျွမ်းတ ၀ င်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ငါအချို့ဒေသများရှိသူသည်အဘယ်သူသည်နှင့်သူတို့၏သင်ယူမှုစတိုင်များဖြစ်ကြောင်းကိုအထဲကရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သူမသည်သူမအတန်း၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသောကျောင်းသားတစ်ယောက်ရှိနိုင်ပြီး၊ ထို့နောက်တွင်သူတို့၏သင်္ချာစွမ်းရည်အပေါ်ယုံကြည်မှုနည်းသောအခြားမောင်နှံစုံတစ်စုံကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အဓိကစိန်ခေါ်မှုမှာမျှတမှုတစ်ခုရှာဖွေခြင်းနှင့်ကျောင်းသားတစ် ဦး ချင်းစီ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်၊ သူတို့သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး နားလည်မှုအဆင့်အမျိုးမျိုးရှိသော်လည်း
တခါတရံကျွန်ုပ်သည်အကြောင်းအရာကိုကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးနည်းဖြင့်မရှင်းပြခဲ့ဟုခံစားရသော်လည်းများသောအားဖြင့်အတွေ့အကြုံကအလွန်ကောင်းသည်။ ငါသည်သူတို့၏ဆရာထက်အသက်အရွယ်နှင့်လည်းပိုမိုနီးကပ်ကြောင်းကိုလည်းသတိပြုမိသည်။ သူတို့ဘဝရဲ့ကောင်းကျိုးတွေအကြောင်းကျွန်တော့်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ငါကသင်္ကြန်ပြီးတဲ့နောက်သုံးမိနစ်လောက်စာသင်ခန်းစာသင်ခန်းတွေကိုသွားပြီးစကားပြောတယ်။
ကောလိပ်တက်ပြီးနောက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း / ရပ်ရွာလူထုပါဝင်မှုကိုသင်စဉ်းစားသောအခါဤအတွေ့အကြုံကသင်၏အကျိုးစီးပွားအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုရှိသလား။
APIE သည်ကျွန်ုပ်၏အကျိုးစီးပွားများနှင့်ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်သည်။ ကလေးတွေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့် STEM ပညာရေးမြှင့်တင်ရန်ငါ့အဘို့အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုခုသည်။ ကျွန်တော့်ရည်မှန်းချက်က ER ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ပါ။ ငါကောလိပ်နှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းဘွဲ့ရများအကြားရပ်ရွာထဲတွင်အလုပ်လုပ်ရန်အချိန်အနည်းငယ်ယူရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်တစ်စုံတစ် ဦး ကစာသင်ခန်းနည်းပြအနေဖြင့်လုပ်အားပေးသင့်သနည်း။
သင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးအကြောင်းပြချက်မှာရပ်ရွာနှင့်ထိတွေ့မှုဖြစ်သည်။ ငါကြီးရင့်ကျက်တဲ့ဘဝနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီးပြန်ပေးဆပ်ခြင်းဟာကျွန်တော့်အဘိုးအဘွားတွေဆီကတဆင့်သင်ကြားပို့ချပေးနိုင်တဲ့တန်ဖိုးကြီးတစ်ခုပဲ။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းခြင်းသည်စာသင်ခန်းနည်းပြတစ် ဦး အနေဖြင့်ပါ ၀ င်ခြင်းနှင့်သင်၏ရပ်ရွာလူထုနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဒုတိယ၊ စာသင်ခန်းနည်းပြတစ်ယောက်အနေနဲ့လည်းငါ့သင်္ချာစွမ်းရည်ကိုစိန်ခေါ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်လေ့လာခဲ့သောဘာသာရပ်များကိုပြန်လည်လွှင့်ရန်၊ ငါတကယ်ကြိုက်တယ်
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် APIE နှင့်လုပ်အားပေးခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ ငါအတန်းထဲမှထွက်သောအခါတိုင်းလတ်ဆတ်သောလေကိုရှူမိသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ငါကလေးတွေအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်တယ်လို့ချက်ချင်းခံစားရတယ်။ အရမ်းပျော်တယ်။
အလှူရှင် Spotlight | အပြင်ဘက်အသံ
Outdoor Voices မှအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ Austin အခြေစိုက်ကြံ့ခိုင်ရေးလက်လီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်သည် APIE ၏ 2018 Austin Marathon အဖွဲ့အားရက်ရောစွာကမကထပြုခဲ့သည်။
"Outdoor Voices မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကလူတွေကိုများများနေ့စဉ်လှုပ်ရှားတက်ကြွလာအောင်လှုံ့ဆော်ပေးဖို့ပဲ။ အားကစား၏အနာဂတ်သည်ပထမနေရာ၌ရှိခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ဖျော်ဖြေရန်ဖိအားကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လှုပ်ရှားမှုများကိုလွယ်ကူခြင်း၊ ဒါကို Doing Things လို့ခေါ်တယ်။ ပြီးတော့မင်းကိုထွက်ဖို့အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးအဝတ်အထည်ကိုကတိပြုတယ်။ - တည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Tyler Haney
ဘယ်ဘက်မှထိပ်တန်းတန်းဖြစ်သောCondé Nast၊ Rosalinda Rivera၊ Dobie အလယ်တန်းကျောင်း။ ဘယ်ဘက်မှအောက်ခြေ - ဆီလီကွန်ဓာတ်ခွဲခန်း၊ Lanier အထက်တန်းကျောင်း။
ယခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ APIE ချန်ပီယံများကိုသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများနှင့်ရုံးများတွင်ဂုဏ်တင်ရန် APIE Awards ကိုလမ်းပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ယူဆောင်သွားခဲ့သည်။ စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများမှသည်ဘဏ္toာရေးထောက်ပံ့မှုအထိဤလူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများသည်ရပ်ရွာကိုစာသင်ခန်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီသည်။ ယခုနှစ်တွင်လက်ခံရရှိသူများမှာ: Dobie အလယ်တန်းကျောင်းကို APIE အလယ်တန်းချန်ပီယံအဖြစ်Condé နှစ်တစ်နှစ်တာ၏အကောင်းဆုံးလူသစ်များ၊ Silicon Labs ၏တစ်နှစ်တာစီးပွားရေးစီးပွားဖက်အဖြစ်၊ Lanier အထက်တန်းကျောင်းအထက်တန်းကျောင်းချန်ပီယံနှင့် Rosalinda Rivera တို့သည် APIE ၏ညှိနှိုင်းရေးမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချန်ပီယံ!
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းပါ။ | ယခုအငှား: ကောလိပ်အဆင်သင့်နွေရာသီ Associates မှ
နွေရာသီအစီအစဉ်ရှိလား။ APIE နှင့်အတူ AmeriCorps VISTA ဖြစ်လာသည်။ VISTA Summer Associate တစ်ခုစီသည် ၉ ကြိမ်မြောက် ၉ တန်းကျောင်းသားများအတွက်အပတ်စဉ်နာရီ ၂၀ မှ ၃၀ နာရီသင်ကြားပို့ချပေးမည်။ နေထိုင်စရိတ်နှင့်ပညာရေးဆုတို့ပါဝင်သည်။ ပိုမိုလေ့လာရန် link ကိုနှိပ်ပါ https://bit.ly/2meFPkL
Donသို့မဟုတ်နေ့လည်စာစားပွဲ မတ်လ 28, 2018
ယခုလတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်စဉ်တန်ဖိုးရှိသောနေ့လည်စာ၌ကျွန်ုပ်တို့၏မယုံနိုင်လောက်အောင်အလှူရှင်များကိုကျင်းပခဲ့သည်။ APIE သည် Austin ISD ကျောင်းသူကျောင်းသားများအားကူညီရန်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Wells Fargo၊ Charles Schwab၊ IBM၊ Silicon Labs, Austin ISD၊ 2018 မာရသွန်အသင်း ၀ င်များနှင့်အလှူရှင်များ၏ကိုယ်စားလှယ်များအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Prevရှေ့APIE ၏တစ် ဦး ကအချပ်: ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 သတင်းလွှာ
နောက်တစ်ခုAPIE ၏တစ် ဦး ကအချပ်: ဇွန်လ 2018 သတင်းလွှာနောက်တစ်ခု
A Slice of APIE: March 2022 Newsletter မတ် 25, 2022
Connecting with the APIE Board: Q&A with Rev. Dr. Daryl L. Horton မတ် 23, 2022